Wella 5* Gold Award Luxury Cottage - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGary
I-Wella yindawo entle, ekhanyayo kunye neyomoya yeholide yobumnandi ebekwe kumbindi weSt Ives kufutshane nedolophu ephithizelayo, izibuko kunye nolwandle olunesanti. Kutshanje ihlaziywe ine-beachy vibe eyonwabisayo kunye nokuchukumisa okumangalisayo.
I-Wella inamagumbi okulala ama-2 amahle, elinye eliphindwe kabini kunye newele apho iibhedi zinokudityaniswa ukuze zenze indawo ephindwe kabini, zombini zibonelela ngee-en-suites enye eneshawari yokungena emvula kunye nenye enebhafu enkulu kunye neshawari ephezulu. Omabini amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela afakelwe iiTV ezinescreen esicaba kwaye anobushushu obuphantsi bomgangatho.
Igumbi lokuhlala / lokutyela elineplani evulekileyo liqhayisa ngemiqadi ye-oki entle kunye nezinto ezitofotofo kulo lonke. Ikhitshi elihle elixhotyiswe ngokupheleleyo, umona wabapheki abaninzi, linabela kwindawo yokutyela yosapho.
Ipropathi yabelana ngentendelezo yabucala ene-patio heater yokutyela i-alfresco ngeengokuhlwa zasehlotyeni kunye nendawo ekhuselekileyo yokuba abantwana abancinci badlale. Fumanisa kwakhona ulonwabo losapho kunye ne-adventure kwindawo emangalisayo.
Ipakethi eyamkelekileyo yokwamkela kunye neenwele ezintle zeBramley kunye neemveliso zomzimba zinikezelwe ukuba uyonwabele. Siyavuya kukwazi ukunika iindwendwe zethu indawo yokupaka ekhuselekileyo eneCCTV ebekwe malunga nekhilomitha enye ukusuka kwiindlwana. Ikhowudi yePosi yendawo yokupaka iimoto ithi TR26 2JH.
ICornwall idume ngemida yayo yasendle, yaselunxwemeni emangalisayo kunye neendawo ezisemaphandleni ezitsala abo bafuna iholide esebenzayo nengalibalekiyo.
I-St Ives ngokwayo yidolophu entle engaselwandle enolwandle kunye nesibhakabhaka sidibanisa ukuvelisa inkalo emangalisayo yokukhanya etsala amagcisa kunye neengcibi ukuba baphonononge ubuchule babo ngokupheleleyo. Kukho intaphane yeegalari zobugcisa, iimyuziyam, ubugcisa kunye neendibano zocweyo ngaphakathi edolophini.
I-St Ives ikwanendawo yokutyela emangalisayo, edlamkileyo kwaye abatyeleli bethu bamoshelwe ukukhetha xa befuna ukutya ngaphandle, isidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye sangokuhlwa. Ukusuka kwintlanzi kunye neetshiphusi ezitsha ephepheni ukuya kwindawo yokutya ephezulu ejonge ukutshona kwelanga okuhle kukho into yomntu wonke.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- St. Ives